Warbixinta faragelintii Ingiriiska ee Ciraaq oo la daabacayo - BBC Somali
Warbixinta faragelintii Ingiriiska ee Ciraaq oo la daabacayo
6 Luulyo 2016
Image caption Ciidammada Britain ee ku sugnaa Ciraaq
Maanta ayaa lagu wadaa in la daabaco warbixin uu guddi Britain ah soo saarayo oo ku saabsan faragelintii lagu sameeyay dalkaasi Ciraaq.
Gudoomiyaha gudidii baarayay ka qayb galkii Ingiriiska ee dagaalkii Ciraaq, Sir John Chilcot, ayaa sheegay inuu rajaynayo in warbixinta ay soo saarayaan ay noqon doonto mid horseeda in faragalinta milatari ee baaxaddaa leh aan mustaqbalka lagu degdegi doonin iyadoo aan si taxaddar leh loo lafa gurin isla markaana aan go'aan siyaasadeed laga gaadhin.
Sir John Chilcot, ayaa hadalkan sheegay iyadoo la sugayo in maanta la baahin doono warbixinta gudidiisa. Waxaanu intaa ku daray inuu naawilayo in warbixitani dawladaha u horseedi doonto inay si qoto leh u fikiraan inta aanay dullaan qaadin.
Go'aankii Ra'isal wasaarihii xiligaa, waa Tony Blair, ee uu ku goostay in ciidamo ingiriis ahi galaan dalka Ciraaq ka dib qaraar baarlamaanku ansixiyay ayaa noqday go'aan siyaadda dibadda la xidhiidha kii ugu ba'naa ee la isku maandhaafo kontonkii sannadood ee la soo dhaafay.
Haseyeeshee Mr. Blair ayaa maxfallo badan ka difaacay go'aankiisii ahaa in ciidamo ingiriis ahi galaan Ciraaq, isagoo sheegay in hadii ay tiisa tahay uu qaadi lahaa tallaabo taas la mid ah hadii halis la mid ah tii Saddam Xuseen oo kale ahi ay soo baxdo mark kale.